Nzọụkwụ 7 na Digital Marketing Nirvana | Martech Zone
Nzọụkwụ 7 na Digital Nirvana Marketing
Tuesday, February 4, 2014 Sọnde, Febụwarị 2, 2014 Douglas Karr
Ka anyị na ndị ahịa anyị mejuputa usoro dijitalụ, ana m atụ ụjọ na anyị anaghị egosipụta ma kọwaa atụmatụ ahụ yana anyị nwere ike ịbụ. Enwere m ekele maka nghọta miri emi maka ijikọ atụmatụ a nke usoro ahịa ahịa dijitalụ zuru oke, nke ọma na usoro ị kwesịrị ịme iji mejuputa. Achọrọ m iso ndị ahịa anyị rụọ ọrụ iji kọwaa usoro a nke ọma ma tinye usoro ihe ịga nke ọma anyị.
Ihe omuma ohuru nke Smart Insight depụta usoro ị ga - eme iji melite ojiji gị maka ịre ahịa dijitalụ. Iji nyere gị aka iji ọganihu gị tụnyere ụlọ ọrụ ndị ọzọ, ha etinyela nsonaazụ sitere na nyocha ha mere na nso nso a banyere etu azụmahịa si aga ijikwa ahịa dijitalụ, akụkọ na-akwụghị ụgwọ.
Tags: usoro ahia ahiaezi uche
Esi Zụta ngalaba Nke edebanyere aha